थैंङ्क यु कोरोना | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
घर समाचार वाटिका थैंङ्क यु कोरोना
थैंङ्क यु कोरोना
अचेलको युगमा निकै फेशनमा छ; सकारात्मक सोच, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘पोजेटिभ थिङ्किङ’ भन्ने गर्छन्।
यहाँ त समस्या प–यो के भने हामी सोच चैं पोजेटिभ खोज्छौं तर कोरोनाको जाँचमा चैं पोजेटिभ हैन नेगेटिभ खोज्छौं। यो जुग नै डबल स्टैन्डर्डको हो।
सकारात्मक सोच बनाउने क्रममा केही वर्ग यस्ता पनि देखिन्छन्, जसले यस कोरोनाकालमा पनि शुभलाभ प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। भन्नुहोला, कसरी ? लौ त हेरौं कटु यथार्थ, सकारात्मक चश्मा लाएर।
कैयौं महीनादेखि सरकारद्वारा लागू गरिएको लकडाउन, कफ्र्यू, सैन्य सञ्चालन सबै थरीका सरकारी थिचोमिचो सहेर बस्दा–बस्दा जनता वाक्क भइसकेको अवस्था छ।
कोरोना कहरका बेला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भाग्यमानीहरू यस प्रकार छन्ः
क) दूध बेच्नेले जतिसुकै मात्रामा जल मल हाले पनि ग्राहकले किन्नै पर्ने बाध्यताले गाईभैंसी पाल्ने लाभान्वित भएका छन्।
ख) खाद्य सामग्रीका व्यापारीहरूले पनि मनपर्दो भाउ उपर असुल गरेर शुभलाभ प्राप्त गरिरहेका छन्।
ग) हरियो परियो तरकारी बेच्नेहरू पनि हालखबर सोध्दा ‘चकाचक छ !’ भन्छन्।
घ) होम डिलेभरी भन्दै सडेगलेका फलफूल, मिठाइ र अन्य पदार्थ घरमैं पु–याएर दुई/तीन दोब्बरको मुनाफा खानेलाई पनि कोरोनाकाल लाभदायी सिद्ध भएको छ।
ङ) अल्छी र घुस्याहा कर्मचारीहरू लकडाउनको निहुँ गरी घरमैं बसी–बसी घूसको सुव्यवस्था मिलाउन सफल भएका छन्। सरकारले बाहिर निस्किनुहुँदैन भनेर सेना सञ्चालन गरेकोले घरमैं बसेर जनताको सेवा गर्दैछु भन्छन्, यस्ता राष्ट्रसेवक। सरकारले यस्तालाई कदर गर्नुपर्ने हो।
च) हरेक वस्तुका व्यापारीले आफूखुशी भाउ लिन पाउने चलन चल्या हुनाले प्रायः सबै व्यापारी कोरोनाको कृपाले कुम्ल्याउने काममा कम्मर कसेर कुदिरहेको अवस्था छ। यिनीहरू त अचेल ‘ओम कं कोरोना पतये नमः’ भन्ने मन्त्र जप्छन् रे ! कतिले त नवजात शिशुको नामै कोरोना राखेका छन्।
छ) पढ्न मन नपराउने छात्रछात्राहरूलाई कोरोना आतङ्कले निकै राहत दिएको छ। अब दिनरात मोबाइल, टिभी हेरेर समय बिताउन पाइएको छ। जय कोरोना, पढ्न लिखना बन्द करो ना ! ब्वायफ्रेन्ड–गर्लफ्रेन्डसँग भेटघाट गर्ने यही मौका हो।
ज) गुरुजीहरू, मैम–मिस–सर सबैलाई हाइसञ्चो छ। काम नगरे पनि तलब त पाइहालिन्छ। हरहर न कचकच !स्कूलहरू बन्द भएपनि प्राइभेट ट्युशन पनि चलेको चल्यै छ। यस्ता गुरुहरू भन्छन्, हामी त सरस्वतीका सेवक। जस्तोसुकै डरलाग्दो अवस्था भएपनि हामी त सेवा गर्ने बाटो खोजिहाल्छौं।
झ) यस्तै–यस्तै कथा छ डाक्टर’साबहरूको। अस्पतालमा नभेटिने, प्राइभेटमा नअटाउने भीड। यस्तो सेवा पो सेवा। पैसा कमाउँदा कमाउँदा फुर्सतै हुँदैन, बिचराहरूलाई !
ञ) कतिपय जागीरेहरूले सामान्य अवस्थामा बिदा नै पाउँदैनन्। उनीहरूका लागि त यो अपर्झट अवस्थाले छुट्टी मिलाइदिएको छ। धन्य छ कोरोना १
ट) सडकहरूमा गाडी र मान्छेको अभावले वायुमण्डल स्वच्छ भएको छ। मर्निङवाक गर्नेहरू आवश्यकताभन्दा बढी उत्साहित भएर सपरिवार प्रातःभ्रमणमा निस्कन थालेका छन्।
ठ) यै मौका छोपेर छोराछोरीको बिहे गरेर पार्टी खर्च बचाउनेहरू पनि आनन्दमा छन्। यसरी हेर्दा यस्ताको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दो छ; जसले भन्छन्– थैङ्क यू कोरोना !
अघिल्लो लेखमाकविवर माधव घिमिरे– छोटो परिचय
अर्को लेखमामेड इन चाइना
प्रहरी राष्ट्रसेवक हो, शासक होइन
पर्यावरण संरक्षणको नाममा ब्रह्मलुट
कोरोनाभन्दा पनि ठूलो सङ्कट खडा हुन सक्छ
सक्कली हरायो ! नक्कली आयो !!
एउटा प्राथमिक विद्यालयको भ्रमणमा